Nyanzvi Mune zveMishonga Dzopembedza Danho reHurumende Rekubvumidza Kurimwa kweMbanje
Hurumende inoti vanenge vachida kurima mbanje iyi vanobhadhara madhora zviuru makumi mashanu kuti vawane rezinesi.
Nyanzvi mune zvekurapa dzinoti kurimwa kwembanje kuti ishandiswe semushonga wekurapa zvirwere zvakasiyanasiyana idanho rakanaka zvikuru huye zvichabatsira vanobika mapiritsi nemishonga.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Doctor Evans Masitara vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yanga yakatosaririra shure sezvo dzimwe nyika dzichirima mbanje yekushandisa mukurapa.
Doctor Masitara vanoti mumbanje mune zvinotorwa zvinorapa zvinhu zvakadai semarwadzo, vanhu vasina chido nekudya pamwechete nenhuta.
Vanotiwo mbanje dzinenge dzabikwa idzi (processed) ndochete dzinoshanda kurapa. Doctor Masitara vapa yambiro kune veruzhinji vakati chero zvazvo mbanje dzichirapa, mbanje dzekuputa kana kudya dzine njodzi. Vanoti kuputa mbanje kunokonzera kukanganisika kwepfungwa.
Studio 7 yataurawo nesangano reZimbabwe National Traditional Healers Association (Zinatha) avo vanoti vange vagara vachishandisa mbanje mumabasa ekurapa.
Vanoona nezvezvirongwa zvedzidziso musangano iri, VaPrince Mutandi vanozivikanwa nezita rekuti Sekuru Sibanda vachigara kuMufakose vaudza Studio 7 kuti vanoshandisa mbanje kurapa zvirwere zvakadai sebuka, Asthma, kubvisa mamhepo pamwepo nekudzinga munyama.
Sekuru Mutandi vaudzawo Studio 7 kuti mbanje inopawo simba pabonde.
VaMutandi vati kusangano ravo reZinatha, mbanje inongoshandiswa munezvekurapa huye havakurudziri kuti iputwe.
Imwe n’anga yada nekuzivikanwa nezita rekuti Sekuru Siwela vaudzawo Studio 7 kuti kazhinji vanoshandisa mbanje kupfungaidzira varwere kana kuti vageze nayo.
Kuburikidza nemutemo we Statutory Instrument 62 of 2018, "Dangerous Drugs – Production of Cannabis for Medicinal and Scientific Use Regulations", hurumende yakabvumidza kurimwa kwembanje yekushandisa mukurapa.
Mukuchengetedza kuti isashandiswe zvisizvo, gurukota rezveutano ndiro rinenge richipa marezinesi ekurima uye rezinesi iri rinoda mari inosvika zviuru makumi mashanu zvemadhora.